Filed under: ခံစားမှုသက်သက်, အတွေ့အကြုံ —3Comments	01/12/2009
အယ်ဒီတာလုပ်တော့ ရုံးမှာ ကွန်ပျူတာကို နီးနီးကပ်ကပ်နေ့စဉ် တွေ့လာရပြီ၊ တစ်ခါတခါ ကိုင်တွယ် သုံးစွဲလာရပြီ။ စာစီစာရိုက်နဲ့ ဂရပ်ဖ်ဖစ် ဒီဇိုင်းဆရာတွေ ဒီဇိုင်းလုပ်တာကို ၀ိုင်းကူလုပ်ရင်း ကွန်ပျူတာနဲ့ ပိုပိုရင်းနှီးလာပြီ။ ကွန်ပျူတာကို ဒီထက်ရင်းရင်းနှီးနှီး ထိတွေ့ချင်လာပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ရုံးမှာက အယ်ဒီတာချုပ်၊ အယ်ဒီတာတို့ဆိုတာက နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ စာရိုက်ချင်ရင် ရေးပြီးပေးလိုက်၊ ဒီဇိုင်းဆရာကို အကြံပေးချင်ရင် ဘေးကနေပြောလိုက်ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာကို ကိုယ်တိုင် ကိုင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူဌေးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကားမမောင်းရဘဲ ကားနောက်ခန်းကနေ ထိုင်လိုက်ရသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ မောင်က ကားကိုယ်တိုင်မောင်းတဲ့ သူဌေးလိုမျိုး ကိုယ်တိုင်မောင်းချင်နေတာ လက်ကိုယားနေခဲ့ပြီ။ ခက်တာက အယ်ဒီတာချုပ်အပါအ၀င် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတဲ့ ဂျာနယ်အဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေက အတွေးအခေါ်တွေကသာ ဆန်းသစ်လွန်းပေမယ့် ရှေးက အယ်ဒီတာမင်းတွေလို စားပွဲကြီးမှာပဲ စတိုင်လ်ပါပါနဲ့ စာတွေချည်း လှိမ့်ရေးချင်တာမျိုးဆိုတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ စာစီစာရိုက်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆရာအတွက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (အယ်ဒီတာတစ်ယောက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး မပေးနိုင်တာလည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့လေ။)
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Window Xp ပေါ်တဲ့အခါ နောက်တစ်လုံးထပ်ဝယ်ပါတယ်။ လက်ပ်တော့ပ်ကိုတော့ အမေရိကသွားတုန်းက ၀ယ်ပါတယ်။ အမေပဲဝယ်ပေးတာပါ၊ လက်ပ်တော့ပ်ဝယ်ဖို့ ကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သပ်သပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမေ့ကို တစ်ခုကျေးဇူးတင်ရမှာက သားကို ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီသားဟာ မဟုတ်တာလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သူ တစ်ခုခုကို အားစိုက်လုပ်ချင်လို့ ဒီလိုတောင်းဆိုတာပဲဆိုပြီး ပုံအပ်ယုံမှတ်လိုက်တာပါ။ ဒီတော့လည်း သားဖြစ်သူမှာ ပြန်တာဝန်ရှိသွားပါတယ်၊ နောက်တီးနောက်ချာ မလုပ်ဝံ့တော့ပါဘူး။
ဘ၀ရဲ့ပထမဆုံးလက်ပ်တော့ပ်ကို အမေရိကရဲ့နည်းပညာမြို့တော် ဆီယက်တဲလ်က Best Buy မှာဝယ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ၀န်ထမ်းတွေ အားကိုးတဲ့ဆိုင်ပါ၊ ဈေးမှန်ပစ္စည်းကောင်းတွေရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့သူငယ်ချင်းက Lexus ကားနဲ့လိုက်ပို့ပြီး လိုက်ဝယ်ပေးပါတယ်။ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး Lexus ကား စီးဖူးခြင်းပါ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ကိုက်ပြီး ၀ယ်တော့ ငွေရောင် Sony Vaio NS စီးရီး တစ်လုံးရပါတယ်။ ၀င်ဒိုးက Vista ဖြစ်လာပါပြီ။ Build-in card reader ပါတာကို မသိတော့ သပ်သပ် ထပ်ဝယ်ပါတယ်။ လက်ပ်တော့ပ်သာ ၀ယ်တာပါ၊ တုံးပါသေးတယ်။ နောက် Microsoft wireless mouse တစ်လုံးဝယ်ပါတယ်။ တိုလီမိုလီတွေပါ ၀ယ်လိုက်တော့ ဘတ်ဂျက်ထက်ကျော်ပြီး ၆၀၀ ကျော်သွားပါတယ်။ ကိုယ်က ၅၀၀ ပဲ သုံးဖို့ ရည်မှတ်ထားသူဆိုတော့ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းက ၀ယ်သာဝယ်လိုက်ပါ၊ သူ ၁၀၀ မုန့်ဖိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့ အလွန်ပျော်သွားပြီး တက်တက်ကြွကြွဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မပြည့်စုံသူလေးမောင့်ကို သူငယ်ချင်းက ညစာ လိုက်ကျွေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အမေရိက က ၀ယ်လာတဲ့ လက်ပ်တော့ပ်လေးကို ကိုယ့်ရည်းစားလေးလို သဘောထားပြီး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ မထိရက်မကိုင်ရက် သုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရုံးမှာက ဒက်စ်တော့သုံးခွင့်ရတော့ ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်လေးကို တစ်ခါတလေမှသာ အိမ်မှာသုံးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်က ဒက်စ်တော့ကြီး မဖွင့်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ ရည်းစားလေးက ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ ကြင်နာကြင်နာ၊ သူကတော့ သစ်စိမ်းချိုးချိုးပါတယ်။ (တကယ်တော့ သစ်စိမ်းချိုးချိုးတယ်ဆိုတာကို မြန်မာအဘိဓာန်က ရုတ်တရက်မညှာမတာ အဆက်ဖြတ်သည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးပေမယ့် အတွေ့အကြုံအရတော့ သစ်စိမ်းချိုးချိုးတာက ခက်ပါတယ်၊ သစ်ခြောက်ချိုးတာကမှ ထောက်ကနဲနဲ့ ကျိုးတာပါ) လက်ပ်တော့ပ်လေးက ဘာမှလည်း သေသေချာချာ လုပ်ပါဘဲနဲ့ တစ်နှစ်တောင် မကြာပါဘူး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာပဲ သူ့ဘက်က စဖောက်ပါတယ်၊ Adaptor ဂန့်သွားပါတယ်။ ရန်ကုန်က လျှပ်စစ်မီးဗို့အား မမှန်လို့များလားလို့ သံသယဖြစ်ပေမယ့်လည်း အို..ပျက်ချင်လို့ ပျက်တာပဲလေလို့ပဲ စိတ်သက်သာအောင် တွေးရပါတော့တယ်။ ဘတ္ထရီလည်း ကုန်ရော၊ ရည်းစားလေး ကွန်ပျူတာက အသေကြီးလိုဖြစ်ပြီး ဘာမှ လုပ်မရတော့ပါဘူး။ ရည်းစားဦးလေးဟာ ကိုယ့်ကို စခွဲဖို့ ကြံပါပြီ။ တရားလည်း ရချင်ချင်ဖြစ်ပါပြီ၊ ပစ္စည်းက ပျက်ချင်ပျက်ပြီဆိုတာ စတင်နားလည်ပါပြီ။ အမေရိက က ၀ယ်လာပြီး မြန်မာပြည်မှာ သုံးတာဆိုတော့ Warranty တွေ၊ ဘာတွေနဲ့လည်း ပြန်ပြီးအရေးဆိုဖို့ အခွင့်အရေးတောင်းဖို့ဆိုတာက မလွယ်တာမို့ ပြည်တွင်းမှာ Adaptor ရှာရ မေးရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့က စင်ကာပူကနေ ပြန်မှာပေးမယ်လို့ဆိုလာတာမို့ ဂျပန်ကနေ ရန်ကုန်ပြန်လာဖို့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အကူအညီတောင်းပြီးနောက်မှာ Adaptor အသစ်ပြန်ရပါတယ်။ ရည်းစားဦးက သစ်စိမ်းချိုးချိုးပေမယ့် ကိုယ်က မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုသလို ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်လေးကိုလည်း သူငယ်ချင်းအကူအညီနဲ့ အသက်ပြန်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ မောင်က PC World မသွားဘဲ Sony Center ကို အရင်သွားပါတယ်၊ စင်တာက ရောင်းပဲရောင်းတာ မပြင်ဘူး၊ ပြင်ချင်ရင်တော့ သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဆိုင်ကိုသွားဆိုပြီး ညွှန်ပါတယ်။ ရောက်သွားတော့ ရယ်ရပါတယ်။ + လက္ခဏာဆိုင်းဘုတ်နဲ့ Digital Clinic ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆေးခန်းတချို့လို မှန်ပုံးလေးနဲ့ပါပဲ၊ အတွင်းမှာ မီးထွန်းထားတယ်လေ၊ ဆရာဝန်တွေက အပေါင်းလက္ခဏာကို အနီရောင်သုံးပေမယ့် အဲဒီမှာတော့ အပြာရောင်ကို သုံးထားပါတယ်။ ဆေးနံ့တောင် ရလိုက်သလိုပါပဲ၊ မောင့် စိတ်ပဲ ဖြစ်သလား၊ သူတို့ပဲ Marketing သဘောအရ ဆေးနံ့ထည့်ထားလေသလားလို့ မသိပါဘူး။
မောင်က ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်၊ ငါ့ နောက်တာလားလို့လည်း ထင်သွားပါတယ်။ မသိရင် ကုတင်ပေါ်လှဲနေတဲ့ လူနာကို ဆရာဝန်က သွေးကြောစမ်းရင်း သူ့လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုး။ သူ့ပုံစံကလည်း ဆရာဝန်ပုံပါပဲ၊ သူ မနောက်ပါဘူး။ တစ်မိနစ်ကြာအောင် ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်ထားပါတယ်။ နောက်မှ ပါဝါဂန့်သွားတာပါ။ အခုတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါတဲ့။ (အော် အခုမှ နောက်တာကိုး၊ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့လို့ ရောက်တောင်လာပြီဥစ္စာ) နောက်ပြီး သူဆက်ပြောတာက အတွင်းဘက်က ပျက်တယ်လို့ယူဆကြောင်း၊ ထားခဲ့ရမယ်၊ ပေါင် ၅၀ ပေးရမယ်၊ အသေးစိတ်ထပ်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်၊ ပြင်လို့ရရင် ပြင်ပေးမယ်၊ ပြင်ပြီးရင် တောင်းသမျှထပ်ပေးရမယ်၊ ခုန ယူထားတဲ့ ၅၀ ကိုတော့ ပြန်ခုနှိမ်ပေးမယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။
နောက်တစ်ရက် အကြောင်းမပြန်တော့ မောင် ထပ်လိုက်သွားတယ်၊ တစ်ခါ နောက်တစ်ရက် အကြောင်းပြန်မယ်လို့ပြောပြန်တယ်။ နောက်တစ်ရက်စောင့်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့မှ Motherboard ကြွသွားပြီ၊ လဲမယ်ဆို ၁၈၅ ပေါင်ကျမယ်၊ ၁၀ ရက်ကြာမယ်လို့ ပြောတယ်။ ပထမတော့ ၂၀၀ လောက်တောင်ကျမယ်ဆို မပြင်တော့ဘူး၊ နောက်ထပ် ၂၀၀ ထပ်ထည့်ပြီး အသစ်တစ်လုံးဝယ်မယ်လို့ မောင် စဉ်းစားတယ်၊ ဒါပေမယ့် စက်ထဲမှာက ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဒေတာတွေရှိနေတယ်၊ အဲဒါတွေ မဆုံးရှုံးချင်ဘူး၊ ဒီတော့ ပြင်မယ်ဗျာဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။
3 Comments: ရူပအောင်
01/12/2009 at 5:10 pm	ဟူး စိတ်တောင်မောသွားတယ်၊ ဒါကြောင့် ပိုစ့်အသစ်တွေမတွေ့တာကိုး၊ ကွန်ပျူတာက ညှာတာ မကောင်းဘူး၊ များများခိုင်းပေး၊ တချိန်လုံးဖွင့်ဘာမှ မဖြစ်၊ မဖွင့်ပဲကြာကြာနေရင် သူက စိတ်ဆိုးတယ်၊
မောင် လို့ ရေးတာ ဖတ်ကောင်းပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အပြင်ဘက်ရောက်တာတောင် မြန်မာအယ်ဒီတာစိတ်ရှိနေတုန်းပဲ၊ ကန်ဒေါ်လာ လို့ ရေးရင် အရမ်းစိတ်တိုတာပဲ၊ မြန်မာဂျာနယ်တွေမှာ အဲလိုရေးတာတွေ့တိုင်း ဘာလို့အဲလိုရေးတာလဲ ? စာအသစ်တွေ များများရေးသာရေးပါတော့၊ ရည်းစားဦးလိုပဲ မထိရက် မကိုင်ရက် လုပ်ရင်တော့ …🙂
01/12/2009 at 6:00 pm	သြော်…. Post အသစ် မတက်တာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး။ မရူပပြောသလိုဆို ရည်းစားဦးကို ညှာခဲ့သမျှ နောက် ရည်းစားသစ် ငွေရောင် Sony Vaio NW တော့ ခံရတော့မယ်ဗျာ။ အညှိုးကြီးနဲ့တော့ အရမ်းမလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်…. ရည်းစားသစ်အတွက် စိုးရိမ်စွာဖြင့်…..😀
01/12/2009 at 6:12 pm	”Sweet December”
Welcome back with new laptop by the way🙂